N'ihi na ọ bụla na kọmputa enthusiast i kwesịrị abịa gafee a mgbasa ozi ọkpụkpọ akpọ VideoLan Client abbreviated dị ka (VLC). Nke a software bụ a free mgbasa ozi ọkpụkpọ na ihe fọrọ nke nta na-arụ faịlụ niile. Nke a ekewet a ngwugwu nke codecs na-ahapụ ya na-egwu nile video na audio usoro na ngwaọrụ gị. Ọ na-arụ ngwa anya media e wezụga ya ike na ka ị strimụ na Internet. Nke a bụ zuru okè media ọkpụkpọ ị na-achọ ma otú dị mma ka ọ bụ? Na-VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ọma na-echebe?
E wezụga ya sleek atụmatụ VLC mgbasa ozi bụ otu narị pasent mma n'ihi na ị na ibudata. Ọ bụ ihe amamihe ibudata a mgbasa ozi ọkpụkpọ site na mma saịtị. Nke a ga na-ị free niile ụdị nje virus. Nke a ọkpụkpọ na-abụghị nanị na-echebe site bu n'obi na-emebi ma na-spyware na bụla ọzọ ụdị mischievousness. Ya mere, VLC media bụ naanị meere maka kọmputa gị mgbe ị na-ọma ibudata ya na a pụrụ ịtụkwasị obi na saịtị. N'aka nke ọzọ, e nwere kemgbe adịghị ike kwuru na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụghị na nchebe. N'okpuru ebe a bụ ihe analysis nke atọ ozi ọma weebụsaịtị.
Na-amalite bụ ozi ọma a na saịtị http://news.softpedia.com/news/VLC-Player-Not-Safe-81298.shtml. Ya nke ọma kwuru na a website na ọhụrụ version nke VLC media Player 0.8.6d nwere ụfọdụ inwe mmerụ. Nke a bụ otu olu nke na niile kọmputa ọrụ iji ụdị ọ bụla nke dị sistemụ. Nke a na-adị mgbe ị na-akpakọtara faịlụ na ndepụta okwu na mgbasa ozi ọkpụkpọ. Dị ka ị mara gị faịlụ a na-enwekarị nwa oge na ebe nchekwa ejupụta na nke ahụ bụ mgbe obi ndị mmadụ nwere ike mgbawa na tamper na faịlụ gị. Na ngwa ngwa oru progression nke a ekwesịghị ga-atụ anya na ndị ọhụrụ mbipute a ọkpụkpọ.
Na a website http://www.theregister.co.uk/2015/01/20/vlc_code_exec_flaws/ e nwere flaws na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na e chọpụtara. A nkà zuru Turkish programmer ka chọpụtara na ojiji onye nwere ike imebi gị na kọmputa na ebe nchekwa na wepụ unspecified Koodu mgbe eji M2V faịlụ ma ọ bụ FLV faịlụ. Ị ga-enweta nke a mgbe eji kere M2V formats na FLV. Nke a kpatara e kwuru na ndị a na nsụgharị nke mgbasa ozi ọkpụkpọ 2.2.0 na 2.1.5 Versions.
N'ikpeazụ on a na ozi ọma website http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=99464 VLC bụ nwedịrị ike ịta si chinchi. Tụnyere ndị ọzọ website VLC media ọkpụkpọ nwere ike na-erigbu site mal bu n'obi onye na-ebu random Koodu. A mụtara site na nke a website bụ na ị kwesịrị ịkpachara anya na ASF faịlụ maka ndị na-2.0.5 VLC version. Nke a bụ oké loophole ka ọsọ ọsọ a na-abụghị ẹdude ebe nchekwa na ntipịa VLC ebe nchekwa usoro. Ọ na-ukwuu gwara-ezere mmeghe faịlụ site omimi onye. Ọzọkwa, ị kwesịrị ị na-adịghị gara ime weebụsaịtị na-mma.
Ná mmechi nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ otu nke kasị mma media egwuregwu ma o nwere adịghị ike. Ya mere, kpachara anya site na nke a obi onye. Zere na ịpị faịlụ na ị na-amaghị ma ọ bụ gaa ọ bụla n'ime obodo weebụsaịtị.
> Resource> VLC> Bụ VLC Nchekwa?